Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny fanalan-jaza mitantana tena miaraka amin'ny fanafody dia heverina ho azo antoka izao
Androany, navoaka tao amin'ny The Lancet Global Health ny fandalinana ny Modely Feasibilité sy ny fahombiazany (SAFE). Ireo mpiaro ny fanalan-jaza azo antoka ao amin'ny Colectiva Feminista La Revuelta de Neuquén (Arzantina), GIWYN (Nizeria), ary any Azia Atsimoatsinanana, miaraka amin'ireo mpikaroka ao amin'ny Ibis Reproductive Health (Afrika Atsimo sy Etazonia), dia namolavola sy nampihatra ny fandalinana SAFE.
Ny fandalinana SAFE, ny fianarana voalohany amin'ny karazany, dia naka olona maherin'ny 1,000 izay nifandray tamina vondrona mpanala zaza azo antoka tany Arzantina na Nizeria, nanaraka azy ireo nandritra ny iray volana teo ho eo, ary nandrefy ny vokatra azony tamin'ny traikefan'izy ireo momba ny fanalan-jaza, miaraka amin'ny fahavitan'ny fanalan-jaza tsy misy fandidiana. fitsabahana ho vokatra voalohany.
Ny fanalan-jaza mitantana tena dia ny fampiasana ny iray amin'ireo fomba fitsaboana roa hampitsaharana ny fitondrana vohoka tsy misy fanaraha-maso klinika naroson'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO). Ny fomba fitsaboana mifepristone naroson'ny OMS miaraka amin'ny misoprostol, na misoprostol irery, dia fomba azo antoka sy mahomby amin'ny fampitsaharana ny fitondrana vohoka amin'ny toeram-pitsaboana. Ny fanalan-jaza mitantana tena miaraka amin'ny fiarahana dia ahitana mpanolotsaina fanalan-jaza tsy voaofana ara-pitsaboana izay manome fampahalalana mifototra amin'ny porofo momba ny fampiasana fanalan-jaza amin'ny fanafody, ary koa ny fihetseham-po feno fangorahana (ary indraindray fanohanana ara-batana), mandritra ny fizotran'ny fanalan-jaza ataon'ny olona iray. Ny fanalana zaza dia omena amin'ny telefaona, amin'ny alàlan'ny sehatra fandefasana hafatra nomerika azo antoka, ary/na mivantana.
Ny fandalinana SAFE dia manamafy porofo efa misy fa, miaraka amin'ny fampahalalana marina, ny olona dia afaka mampiasa fanafody azo antoka sy mahomby mba hampitsaharana ny fitondrana vohoka ivelan'ny toeram-pitsaboana. Ireo valim-pikarohana ireo dia manome porofo amin'ny fanafoanana ny fikarakarana fanalan-jaza tany am-boalohany, ary manohana ny maha-zava-dehibe ny fitohizan'ny fidirana amin'ireo modely lavitra ho an'ny fanalan-jaza fanafody - anisan'izany ny telemedicine - izay nampiharina tany amin'ny firenena maro vokatry ny valan'aretina COVID-19. Ny vokatra avy amin'ity fanadihadiana ity dia manoro hevitra ihany koa fa ny SMA miaraka amin'ny fanohanana avy amin'ny fanohanan'ny mpiara-miasa dia mety ho paikady fototra hanitarana ny fidirana amin'ny fikarakarana fanalan-jaza azo antoka sy mahomby.